OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: July 2013
Telangana: India approvesanew state
By Nilanjan Mukhopadhyay Jul 31, 2013
After dithering for more thanadecade the Congress Party finally bit the bullet and cajoled coalition partners into endorsing the division of the almost 90 million strong state of Andhra Pradesh into two new states: Telangana and Seemandhara. But even after the ruling alliance partners and the highest decision making body of the Congress formally announced the endorsement of the demand foraseparate Telangana, questions remained regarding the timeline that is to be followed. It remains to be seen if the new state will becomeapolitical reality before the next parliamentary elections, due in less than nine months.
Indian students of Osmania University celebrate withacake after India's ruling coalition endorsed the creation ofanew state - Telangana. Pic: AP.
Foralong time it was obvious that the Congress party was unable to make up its mind on announcing the decision to split the existing state because it was unsure about the political consequences. It was evident that the party was in decline in those parts that would remain in the larger portion that is now going to be called Seemandhara. However the reason behind holding back the decision on the provincial split was that party leaders hoped that the decline in the region could be reversed.
Because of this, the Congress steadily lost ground in Telangana region as it had previously committed toaseparate state and was seen to be backtracking like previous governments in office. Finally, it seems that the Congress leadership decided that it could do little to stem the tide in the non-Telegana region. Asaconsequence, it opted to announce the split of Andhra Pradesh in the hope that it would do creditably in the 17 parliamentary seats that will be voted by the people of Telengana while the majority of the remaining 25 seats will largely be split up between the YSR Congress and the Telegu Desam Party.
But there is little doubt that the entire exercise has been conducted inaham-handed manner. The constitutional process of forminganew state out of an existing one is complex. To begin with, afterapolitical decision has been taken, the existing state assembly has to passaresolution supporting the geographical division. Once this resolution has been passed by the state legislature, both Houses of Parliament have to pass the law and only thereafter does it go to the President of India for final ratification. The new state can be inaugurated only thereafter. With suchalong timeline in sight before the formation of the two new states, it is anyone’s guess how soon this will happen.
The issue of redrawing India has vexed the leaders of the country since independence. When India became independent, large parts of what constitutes India now were not part of British territory but only had suzerainty rights over large parts that were ruled by almost 550 rulers of small and medium Princely States. British territories during the colonial period were mainly divided in arbitrary manner into various Presidencies – Bombay, Bengal and Madras besides provinces like Central Provinces and United Provinces.
From the 1920s, the anti-colonial movement led by the Congress party endorsed the idea of provinces formed onalinguistic basis. But by the time India became independent its leaders also became aware of the divisive nature of linguistic identities. In November 1947, Jawaharlal Nehru conceded the linguistic principle, but said security and stability of India was important and could not be jeopardised by diving the country on linguistic lines. Various committees and commission were set up by Nehru’s government but before the first organised bid at redrawing internal maps was made in 1956, Andhra Pradesh was formed onalinguistic basis after an agitation turned violent when an activist onafast died.
For more than six decades India has constantly been redrawn time and again in an arbitrary manner because political pressure groups became unmanageable. India was last time recast in 2001 when the states of Uttarakhand, Chhattisgarh and Jharkhand were carved out of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. By conceding the demand of Telangana, the Centre has opened the Pandora’s Box for many more states for which nascent agitations have been going on for several years.
A couple of years ago when the Telagana agitation was heading for the political quagmire, it had been suggested that the occasion could been used to form the second States Reorganisation Commission. But by not doing so and instead dividing Andhra Pradesh asasingle case, the Congress party has lostachance to takealong term view. The decision shows that the ruling coalition is not looking at anything beyond its present tenure.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 8:11 PM No comments:
Shan Herald/ www.panglong.com
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 10:00 PM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:25 PM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:24 PM No comments:
Although currently accorded the title of president, Burma's heads of state have been givenanumber of titles throughout the country's history, often relating to the chairmanship of various executive councils:
A. 1948–1962: President of the Union of Burma
B. 1962–1974: Chairman of the Union Revolutionary Council
C. 1974–1988: President of the Socialist Republic of the Union of Burma
D. 1988–1997: Chairman of the State Law and Order Restoration Council
E. 1997–2011: Chairman of the State Peace and Development Council
F. 2011–: President of the Republic of the Union of Myanmar
1. Sao Shwe Taik4January 1948 – 16 March 1952
2. Ba U 16 March 1952 – 13 March 1957
3. Mahn Win Maung 13 March 1957 –2March 1962
4. Ne Win4July 1962 –2March 1974 (Military/ Union Revolution Council)
5. Ne Win2March 1974 –9November 1981(BSPP)
6. San Yu9November 1981 – 27 July 1988
7. Sein Lwin 27 July 1988 – 12 August 1988
8. Aye Ko 12 August 1988 – 19 August 1988
9. Maung Maung 19 August 1988 – 18 September 1988
10. Saw Maung 18 September 1988 – 23 April 1992
11. Than Shwe 23 April 1992 – 30 March 2011
12. Thein Sein 30 March 2011 – Present
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 1:52 PM No comments:
Objection against Unlawful Detention ofaHuman Rights Activist, Labyawng Bawk Jar (Lum Nyoi)
(07. 19. 2013) Burmese Statement on Detained Daw Bawk Jar by Tu Lum Marip
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 7:52 PM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:46 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း တခုနှင့်တခု ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်သင့်တယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မတူကွဲပြားသူတွေ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင် နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ မြန်မာအရေးကို ရာစုဝက်ကျော်ကျော် စောင့်ကြည့် လေ့လာခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ပါမောက္ခ Josef Silverstein က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ New Jersey Rutgers တက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခ Josef Silverstein နှင့် ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆရာကြီး Silverstein ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါ ပါသလဲ။ ဆိုတာက မြန်မာ့အမျိုးသား စိတ်ဓာတ်သည် Secular Nationalism လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေးနှင့် ကင်းလွတ်သောအမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်လား။ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓ ဘာသာနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေပါသလား ဆရာကြီး ဘယ်လို သဘောရပါသလဲ။
Josef Silverstein ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အမျိုးသားရေး ဆက်စပ်နေပါသလား။ တခုနှင့်တခု ဆက်စပ် နေပါ တယ်။ အတူတူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ဟာ အမျိုးသားရေးဝါဒီကော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကော အတူတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခုနှင့်တခုဟာ ဖီလာဆန့်ကျင် မဟုတ်ပါဘူး။
Josef Silverstein ။ ။ လုံးဝ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ တစိတ်တဒေသလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပြဿနာတခုကတော့ လူတွေဟာသမိုင်းကို ပြန်မဖတ်ကြတော့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ပြီး စတင်အခြေကျနေထိုင်ခဲ့ကြတာ အဲဒီအထဲမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ ဘာသာတရားတွေ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ တမျိုးနှင့်တမျိုး ဝင်ရောက်ဖက်စွက် တာလည်း မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဘာသာအယူဝါဒ မတူသူတွေကို အတင်း ဘာသာပြောင်းစေဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ တာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
Josef Silverstein ။ ။ အခုအခါ ကျနော်တို့တွေ့ကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတွေ တိုက်ခိုက်မှုတွေ သဘောကွဲလွဲမှုတွေဟာ အဓိကအားဖြင့် ဗမာတွေအနေနှင့် သြဇာအာဏာကို လူထုအသိုင်းအဝိုင်း တခုလုံးအတွက် မျှမျှတတ ခွဲဝေကျင့်သုံးဖို့ ပျက်ကွက်ရာကတဆင့် ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ သမိုင်းမှာလည်း အုပ်စိုးသူ ဘုရင်မရှိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အုပ်စိုးတဲ့ဘုရင် အင်အားပျော့ညံ့တဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ အုပ်စုလိုက် တခြားအုပ်စုတွေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာစိုးလို့ ကာကွယ်ခုခံလာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီကနေ့အခါမှာ မြန်မာပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေ လူမှုဒုက္ခတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်စိုးမှု စနစ်တရပ်ကို မျိုးဆက်တခုက တခုကို နည်းလမ်းတကျ လွဲပြောင်းချမှတ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ရလဒ်တွေလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ငြိမ်းချမ်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖြစ်မလာပဲ တစ်ယောက်လည်ပင်းကို တစ်ယောက် ညစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်နေရတာပါ။
Josef Silverstein ။ ။ အခုတော့ အယူဆသစ်တွေကို ပြင်ပက လူတွေကနေတဆင့် တင်သွင်းလာတာတွေ့ မြင်နေရပါတယ်။ ပြင်ပက ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာ သူတို့နှင့်အတူ စိတ်မချမ်းသာစရာတွေ၊ မုန်းတီးစိတ် တွေ၊ သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေကို သယ်ဆောင်လာပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကာလရှည်ကြာစွာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်လာသူတွေဆီ သွတ်သွင်းပေးနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိလာခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု ပျက်ပြားစရာတွေ ဖြစ်လာရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Josef Silverstein ။ ။ ဒါကိုလည်း နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရမှာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဦးဆောင်ပြီး ပင်လုံညီလာခံ လုပ်စဉ်တုန်းက လူမျိုးစုတွေ သူတို့ဟာသူတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီမံအုပ်ချုပ် နေထိုင်ပိုင်ခွင့်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မူစလင်တွေကိုသော်လည်းကောင်း တခြားအုပ်စုတွေကိုသော်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲဖို့ သူမလုပ်ခဲ့၊ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းပြေပြစ်မှု ရှိနေသမျှ သူတို့ဘာသာ သူတို့နေကြဖို့သာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ Federal ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့အစည်းရေးကို လိုလားပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေ တစုကိုတစု ဝင်မစွက်ဖက်ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နေထိုင်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဇစ်မြစ်ကို အခု ပြန်မသွားကြတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ချင်လာပါတယ်။ ကျန်လူမျိုးစုအပေါ် ကြီးစိုးချယ်လှယ်လာချင်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ ကျနော့်သဘောပြောရရင် သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ကြပါ။လေ့လာကြပါ။ အဲဒီမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ သဟဇာတရှိရှိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ခဲ့ကြ တာကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
နေ့ သစ်/ Renaissance
သမတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ဆိုတာထက် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရထဲမှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေတာတော့ သေချာသလောက်ပဲ။ ဦးအောင်မင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ လုပ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများမသိကြတာက သူဟာ မီးစတဖက်၊ ရေ မုတ်တဖက် ကိုင်ထား တယ်ဆိုတာပဲ။
ဦးအောင်မင်း လူသူမသိ ထိမ်းထားတဲ့အဖွဲ့က NIB အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ပဲ။ ဦးခင်ညွန့် အလွန်မှာ ဖြုတ် လိုက်သလိုလို သတင်းထုတ်ထားပြီး အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်ကျောသပ်မွေးထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ လက်ပန်တောင်း အရေး အခင်း၊ ရခိုင်အရေးအခင်းတွေကို နောက်ကွယ်က မီးစတဖက် ရေမုတ်တဖက်နဲ့ လျှို့ဝှက်လုပ်နေသူဟာ ဦးအောင် သောင်း လို့ လူတွေက မြင်ကြပေမဲ့ ဦးအောင်မင်း ထဲထဲဝင်ဝင် ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာတော့ လူ သိပ်မသိဘူး။ လက် ဆုပ်လက်ကိုင်ပြဖို့ကလည်း ခက်တာကိုး။
ဦးအောင်မင်းက ပါးနပ်တယ်၊ ဆင်ကြံကြံတတ်တယ်၊ သူအပြုံးနဲ့ သူ့မျက်လုံးမှာပေါ်နေတဲ့ အရိပ်ကို ဖုံးကွယ်မရဘူး။ စကားပြောတာ ပွင့်လင်းသလိုလိုနဲ့ နှုတ်ဂတိပေးလည်း သိပ်လွယ်တယ်။ ကြိတ်ပြီး သမတ မှန်းနေတဲ့ ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်း နဲ့ သူနဲ့က စကားဖောင်းပွတယ်၊ ကလေးတွေလို ဂတိပေးလွယ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ဒီမိုအင်အားစုတွေကို နောက်ကွယ်မှာ လှောင်ပြောင် ဟားတိုက်တတ်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့လက်ဦးဆရာ ဦးသန်းရွှေ လိုပဲ အာလူးများ တယ်။ (ဦးသန်းရွှေလည်း အရည်မရ အဖတ်မရ စကားတွေကို တပ်မှူးညီလာခံမှာ တနာရီ၊ တနာရီခွဲကြာ မရှက်မရွံ့ အာတတ်တယ်၊ ကျနော့မှာ သူတို့ပြောတဲ့ အသံဖိုင်တွေ သက်သေရှိတယ်) လက်ပံတောင်းက မြွေတွင်းကို ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်နဲ့ အငှားနှိုက်ခိုင်းသလို၊ ရှစ်လေးလုံး မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့နဲ့ အမှုတွဲဖို့ပါ ဦးအောင်မင်း ကျိုးစား ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်လူတွေနပ်လို့ ချောက်မကျတာ။ ဒါတောင် တာဝန်ယူရဲတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ ပြည်သူတွေထိတ်တိုက်တွေ့အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သလို ဒေါ်စု အပေါ်လူထု ယုံကြည်မှု ကျဆင်း အောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဦးအောင်မင်းက အဲလို ဆင်ကြံကြံတတ် တာကို ပြောတာပါ။
ဦးအောင်မင်းရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင်ကြီးကလည်း ခြစားမှုတွေ၊ ပွဲစားခကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်။ နော်ဝေးကချပေးတဲ့ ငွေက ကုလားခတ်တဲ့ရေ ကုလားဖင်ဆေးလို့ ကုန်ရကိန်းပဲ။ ပညာရှိယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကိုမင်းဇော်ဦးတို့ ဦးလှမောင် ရွှေတို့၊ ဦးတင်မောင်သန်းတို့က သမတ ရတဲ့ လစာထက် ၂ဆ ပိုယူနေတယ်။ ဒေါ်လာတသောင်း လစာယူပြီး ကချင် ကိစ္စကို ထိမ်းပြီးကစားနေတယ်။ စိတ်စေတနာကောင်းပေါ်အခြေမခံဘဲ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူး။ ကိုမင်း ဇော်ဦးတို့ ကိုဇော်ဦးတို့က ABSDF နာမည်ခံပြီး ABSDF ကို အသုံးချ တက်နင်း သွားကြသူတွေလို့ နာမည်ကြီးတယ်။ အရေးတော်ပုံဘက်တော်သားကို သစ္စာဖောက် နေသူတွေက ဘယ်လို ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို အကောင်အထည် ဖော်မှာလဲ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ သူတို့လည်း ကမ်းနားသစ်ပင်တွေ ဖြစ်ရပ်မျိုး မကြာခင်ကြုံရတော့မယ်ဆိုတာ နမိတ်ဖတ်ခဲ့ပရစေ။
သေချာတာက ဦးအောင်မင်းတို့အုပ်စု (သမတ လူကြမ်းများအုပ်စု) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးရွှေမန်းတို့ရဲ့ လွှတ် တော်အုပ်စုတွေ အတွဲမိလို့ပွဲဖျက်ဖို့ ကျိုးစားတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ ၉၆၉ ကင်ပိန်းတွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင် ထားတာ၊ ခုတ လော လှုပ်ရှားတက်ကြွ ဘဂဝါအုပ်စုရဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေတို့ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရှုံ့ချဆန္ဒပြပွဲတို့ကို သမတ လူကြမ်းအုပ်က အသာလွှတ်ပြီးမွေးထုတ်လိုက်တာဟာ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ သူကောင်းပြုခံဖို့နဲ့၊ ဘုန်းကြီးအားပေး ဒကာ ဒကာမ မဲတွေ ရချင်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်ပညာတတ်မှ လက်မခံနိုင်တဲ့ ခြေခြေမြစ်မြစ်လည်းမရှိ၊ ကိုယ့်ပြည်သူတွေနဲ့ အမျိုးသမီးထုအ ပေါ် မှိုချိုးမျှစ်ချိုး စော်ကားတဲ့ အဲဒီ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာကြီးကို လွှတ်တော်က ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်ခံစဉ်းစားပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတတ်သူတိုင်း သိတယ်။ သမတ လူကြမ်းတွေက လွှတ်တော်မှာပွဲဆူအောင် ဘဂဝါ ဗုံးပစ်သွင်းလိုက်တာပါ။ ဘဂဝါအုပ်စု ဆိုတာကလည်း နိုင်ငံရေးနပ်ကြတာမဟုတ်၊ သူတို့အဆိုကို လက်မခံရင် တသက်လုံး မိုးထဲလေထဲ အနစ်နာခံကျိုးစားလုပ်ဆောင်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကိုတောင် မြောင်းထဲမျောပြစ် မယ်လို့ စော်ကားလိုက်သေးတယ်။
ဟိုတနေ့ကပဲ ဦးရွှေမန်းက မီဒီယာမှာ အကွဲအပြဲ ကောလဟလတွေ မယုံကြည်နဲ့ပြောလို့ ကွဲတာသေချာပြီဟလို့ တွေး မိသေးတယ်။ သူလည်း သမတ လုပ်မယ်လို့ပြောကတည်းက ဦးသိန်းစိန်ကို စိမ်ခေါ်လိုက်မှန်း လူတိုင်း သိတယ်။ သူသာ သမတ ဖြစ်ရင် တိုင်းရင်းသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို ပိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ထုတ်ပြောလိုက်တာ ကလည်း ဦးအောင်မင်း လုပ်နေတာလောက်တော့ အပျော့ပေါ့လို့ သတိပေးလိုက်တာပဲ။ ဦးရွှေမန်းကတော့ ဦးသိန်းစိန်ထက် နည်းနည်းပွင့်လင်း ပုံရတယ်၊ သမတ ဦးသိန်းစိန်က တချိန်က ဦးနေဝင်းရဲ့ ရုပ်သေး မဆလ သမတ ဦးစန်းယုနဲ့ သဘာဝချင်းခတ်ဆင်ဆင်။ မခုတ်တဲ့ကြောင်လိုလို၊ ပျော့ပျော့နဲ့နံတဲ့ ကြောင်ချီးလိုလို။ ခေတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အားပေးထောက်ခံနေဆဲမို့ ဦးရွှေမန်းလည်း ကျွဲကူးရေပါသဘော အကြိုက်တွေ့ရင် လက်ခုတ်သံရလာနိုင်တယ်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမတ အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင် ဥပဒေပြင်ပေးမယ်”၊ “ဖယ်ဒရယ်မူကိုကျင့်သုံးရမယ်” ဆိုတဲ့ လူထုကြိုက်လုံးတွေကြောင့် အပြောကတော့ ရွှေမန်း ဖြစ်နေတုန်းပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာဏာရှင်တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေကတော့ ပေါ်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်တွေးပြီးအားကျ မနေပါနဲ့အုံး။ အာဏာရှင်တွေဆိုတာ အာဏာမရှိရင် မနေတတ်သလို၊ ရသလောက်မျိုတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ အခု ဖြစ်နေပုံက ခေါင်းနှစ်လုံးမြွေနဲ့တူတယ်။ အစာအိမ်တခုထဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်တခုထဲပေမဲ့ စားရဝါးရတဲ့အရသာကတော့ ပါးစပ် တပေါက်စီနဲ့မို့ ကိုယ့်ပါးစပ်ပေါက်ပဲ ကိုယ်ထည့်ချင်ကြတယ်။ အစာရှာနေတုံးလည်း ခေါင်းနှစ်လုံးက မညီညွတ်ဘူး၊ တ ခေါင်းသွားချင်တဲ့ဘက် ကျန်တခေါင်းက မလိုက်ချင်ဘူး။ ခေါင်းတခေါင်းက အစာရသွားရင်လည်း နောက်တခေါင်းက ရန်ရှာတယ်။ အမြဲ တခေါင်းနဲ့တခေါင်း ကိုက်တတ် ခဲတတ်တယ်။ အဲ နှစ်ခေါင်းလုံးငြိမ်ဖို့က ပါးစပ်နှစ်ပေါက်စလုံး အစာ ရှိနေဖို့ လိုတယ်။ ဒီတော့ ၂ဝ၁၅ မတိုင်ခင် အာဏာရှင် မြွေခေါင်းတွေ တကောင်နဲ့ တကောင် ကိုက်ကြခဲကြအုံးမယ်။ အစာလုကြ၊ မာန်ဖီကြအုံးမယ်။ ကြားထဲက ပြည်သူတွေပဲ အစားခံ၊ အမျိုခံ၊ ဒါးစာခံဖြစ်နေအုံးမယ် စိတ်ချ။
မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူတွေ တိုးတက်ကြီးပွားအောင် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက် စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ အစိုးရမျိုး ဘယ်တုန်းကကြားဖူးလို့လဲ။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 9:59 AM No comments:
By Zin Linn Jul 03, 2013 8:11PM UTC
Duringaradio address to the nation on Tuesday, President Thein Sein acknowledged the World Economic Forum East Asia Summit in Nay Pyi Taw last month, the state-run media highlighted on2July. The President said it had helped reconnect them with world markets and promote Burma/Myanmar to international investors.
“Towards this goal, we hosted. It is the first time Myanmar has hostedaSummit of this nature and caliber. We should all be proud asanation to be able to successfully hostaSummit that was attended by internationally recognized leaders and experts in political and economic realms,” he said, again noting his awareness to “promote Myanmar to international investors.”
According to him, the idea of the Summit — Courageous Transformation for Inclusion and Integration — also obeys the rules in view of the peace process and resource sharing connected to the wide-ranging economic development. He also expressed his thanks to the committee members – experts, civil servants, university students and volunteers – who took part making the World Economic Forum East Asia Summitasuccess.
However, he expressed his sorrow learning about the events in Malaysia where Myanmar/Burmese migrant workers were attacked.
It was an important lesson for the nation since some groups’ actions at home have impacted on fellow citizens living and working abroad, he advised in his radio speech. He also denounced extremist acts ofasmall group of individuals that use religion asatool to cause fear and spread hatred between different faiths for their personal, political or economic gain. Asanation, all citizens have to work hard to prevent the future occurrence of similar misdemeanors, the President said.
President Thein Sein meets Lt. Gen. Yawdserk on 10 June, 2013 in NayPyiTaw. (Photo: Shan State Army Facebook)
The President also called for strengthening the capacities of the country’s diplomatic missions abroad to protect and promote the safety and well being of fellow citizens who have been working under unsympathetic conditions in foreign countries.
Then, he said that his government has been working hard for the lifting of economic sanctions imposed on the country. Recently, the International Labor Organization (ILO) lifted all sanctions and restored full membership to Myanmar which will help in strengthening the efforts to create economic development, he said.
The President also talked about the July 1, 2013 issue of Time Magazine which caused much anguish and conflict among the public.
“In connection with this matter, my government accepts that as the country takes its initial steps towards democracy, there may be different points of view expressed by sections of the public and national and international media. Indeed, you will be aware that I have worked to restore freedom of expression, accept plurality of opinions and reinvigorate civil society,” he said using the state media.
Particularly, he urged the international media to think about the nation’s reform process that contends with many facets including multicultural structure and historical events.
Finally, he explained briefly about the peace-building work carried out in June. He said he met withaRCSS/SSA delegation led by the group’s chairman. His government has to continue discussing with the KNU and KNPP, and have improved trust building efforts to support with peace-building, the President said. According to him, people have to hear good news with peace-building developments conveying gradually the prospect of long-lasting peace desired by all citizens.
On the other hand, the Restoration Council of Shan State / Shan State Army (RCSS/SSA) has issuedastatement on 29 June, thanking the government for the 15 day trip to Naypyitaw and exhorting it to extend its invitation and hospitality to leaders of other movements as well, according to the Shan Herald Agency News.
“Facilitation by the Union Peacemaking Work Committee (UPWC) and the Myanmar Peace Center (MPC) had enabled us to meet and form cordial relations with leaders there. The result was that we were able to exchange our views and aspirations freely and frankly with them,” reads the 5-page statement, SHAN said.
As said by the statement, the President seems to bea“broad-minded” man but unable to make use of his authority above the military. “There are those within the leadership both who are for and against change. President Thein Sein has his work cut out for him in his quest for peace.”
The military, the statement said, is still bent on resorting to force to resolve differences. Even Vice-Senior Gen Soe Win, army commander in chief, whom the delegation met with, acknowledged that the two sides had fought 97 clashes since May 2012.
Although President Thein Sein has repeatedly affirmed to create long-lasting peace in Shan State, its military has repeatedly violated ceasefire agreement with Shan State Army which may lead to damaging the president’s reform aspiration.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:10 PM No comments:
Objection against Unlawful Detention ofaHuman Ri...